ကျောက်တောင်ကြီးသို့သွားရန် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ခရီးသွားလုပ်ငန်း, အမေရိကန်
၎င်းတို့သည်အင်ဒီးစ်၊ အဲလ်ပ်စ်ကဲ့သို့ကျော်ကြားမှုမရှိသကဲ့သို့ခမ်းနားထည်ဝါစွာမကျော်ကြားသော်လည်းရုပ်ရှင်ရုံနှင့်တီဗီကမ္ဘာသည်သူတို့ကိုလူကြိုက်များစေခဲ့သည်။ ငါပြောတယ် ကျောက်တောင်များ အရာ၌ရှိကြ၏ မြောက်အမေရိက။
အ ကျောက်တောင် ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံများဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ၏ဤအပိုင်းတွင်လူကြိုက်များသောတောင်တက်ခြင်းနှင့်သဘာဝနေရာများဖြစ်သည်။ ယနေ့သူတို့က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရှိကျောက်ဆောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် တောင်တန်းစနစ် အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့အပြိုင်ပြေးပြီးအဲဒီမှာရှိတယ် အဲလ်ဘတ်တောင်ကိုအမြင့်ဆုံး ၄၄၀၁ မီတာအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ra ။ ၄ င်းတို့ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ၎င်းသည် Quaternary Era ၏ရေခဲမြစ်များနှင့်လေထုနှင့်မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုများတိုက်စားခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့သည်။
ဥရောပကိုလိုနီမရောက်ခင်မှာသူတို့ဟာရှိနေဆဲပါ အမေရိကန်အိန္ဒိယလူမျိုး၏အိမ်ကြိုက်တယ် ချောအဆိုပါ apache သို့မဟုတ် ဟုတ်တယ်x နည်းနည်းပြောရမယ်။ ဤတွင်သူတို့က bison နှင့်ကြီးမားသောလိုက်ရှာ။ ဥရောပစူးစမ်းရှာဖွေသူများသူတို့၏လက်နက်များ၊ မြင်းများနှင့်ကူးစက်ရောဂါများကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်များရောက်ရှိလာခြင်းသည်ထိုလူမျိုးတို့၏အဖြစ်မှန်ကိုများစွာပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
ကျောက်တောင်များသည် ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းတွင်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်ရွှေသည်ပုန်းနေသည့်သတ္တုများကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကွဲပြားသောအခြေချနေထိုင်မှုများအတွက်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။
ဤအကာအကွယ်ပေးထားသောနေရာကို ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် နှင့်တစ် ဦး extension ကိုရှိပါတယ် 1.076 စတုရန်းကီလိုမီတာ။ အဲဒီမှာ အရှေ့ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်း နှင့်နှစ် ဦး စလုံးအစိတ်အပိုင်းများကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ယခင်သည်ရေခဲမြစ်များစွာဖြင့်ခြောက်သွေ့သော်လည်းအချို့မှာမိုးများပြီးစိုစွတ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ထူထပ်သောသစ်တောများကိုကြီးထွားစေသည်။
ပန်းခြံအတွင်းပိုင်း ၃၇၀၀ မီတာကျော်အမြင့် ၆၀ ခန့်နှင့်ရေထု ၁၅၀ ခန့်ရှိသည် ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား။ အနိမ့်ဆုံးကဏ္sectorsများမှာရှိသည် မြက်ခင်းနှင့်သစ်တောများ ထင်းရှူးပင်နှင့်ထင်းရူးနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုတက်အဖြစ် subalpine သစ်တော အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မီတာ ၃၅၀၀ ကျော်မြင့်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနေပါကသစ်ပင်များနှင့်သစ်ပင်များမရှိတော့ပါ alpine မြက်ခင်း.
ပန်းခြံသို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာနွေရာသီဖြစ်သည်ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်လကြားတွင်ည ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိသောကြောင့်ညများသည်အေးခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလမှမေလကုန်ထိနှင်းကျလိမ့်မည်။ ပန်းခြံ တစ်နှစ်လျှင် ၂၄ နာရီတစ်ရက်ဖွင့်နိုင်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌စစ်ဆေးသင့်သောအထူးရက်စွဲများမှအပ လက်မှတ်အမျိုးအစားများရှိသည် the ည့်သည်အတွက်
လူတစ် ဦး လျှင် ၁ ရက် Pass - $ 1
လူတစ် ဦး လျှင်7Days Pass: $ 20
လူ ၁၆ ယောက်ထက်နည်းသောမော်တော်ယာဉ်များအတွက်သို့မဟုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်လာသူများအတွက်လက်မှတ်များလည်းရှိသည်။ The Alpine itor ည့်သည်စင်တာ ပန်းခြံရှိအမြင့်ဆုံး ၃.၅၉၅ မီတာမြင့်သောနေရာတွင်စတင်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေခဲမြစ်ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်တောင်ထိပ်များကိုမြင်ကွင်းကျယ်စွာမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ထိုနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များစွာပေးသည်။ အဲဒီလိုမျိုးနေရာနောက်တစ်ခုရှိတယ် Beaver အဘိဓါန် Meadows Center ည့်သည်စင်တာ မိနစ် ၂၀ ရုပ်ရှင်ပြသပြီးပန်းခြံ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မြေပုံတစ်ခု၊ လက်ဆောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နှင့်အခမဲ့ Wi-Fi ရှိသည်။
နောက်ထပ် visit ည့်သည်စင်တာသည် မြို့လယ် Fall မြစ် ပြီးတော့ Holzwarth လို့ခေါ်တဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုရှိပြီးတော့အဲဒီအချိန်တုန်းကလူတွေဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်။ ဒီမှာအဆောက်အအုံတွေကိုနွေရာသီမှာဖွင့်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆောင်းရာသီမှာသူတို့ကိုအပြင်ဘက်ကနေမြင်နိုင်တယ်။ The Kawaneeche itor ည့်သည်စင်တာGrand Lake Village ၏မြောက်ဘက်တွင်ပန်းခြံနှင့်ပတ်သက်သည့်မြေပုံများ၊ The Moraine ပန်းခြံရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစင်တာ ၎င်းသည် Bear Lake လမ်းတွင်ရှိပြီးကိုယ်ပိုင်ပြပွဲများနှင့် Moraine ဥယျာဉ်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုပေးသည့်သဘာဝလမ်းကြောင်းကိုပေးသည်။
ပန်းခြံ၏အတွင်းပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ကျက်သောဤ centers ည့်သည်စင်တာများအပြင်, ခရီးသွားကွဲပြားခြားနားနောက်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ် သာယာလှပလမ်းကြောင်း။ တောင်များကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ Trail Ridge လမ်းMilner Pass ကိုဖြတ်သန်းသွားသောနိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးတောင်တန်းရှိကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် ကျဆုံးခြင်းမြစ်လမ်းဇူလိုင်လအစမှစက်တင်ဘာလကုန်အထိမြေကွက်များဖွင့်လှစ်ထားသည်။
လည်း အများအပြားပျော်ပွဲစားဒေသများရှိပါတယ် နှင့်များစွာသောဖြစ်နိုင်ခြေ , မြင်းစီးခြင်း, တောင်တက်သွားပါ ဒါမှမဟုတ်ထဲကရ စခန်း နှင့်ကြယ်အောက်မှာအိပ်။ က ၀ ီနီချိုင့်ဝှမ်းသည်တောင်တက်ရန်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် Holzwarth သမိုင်းဝင်ဆိုက်ကို နှင့်ဝံပုလှေလမ်းကြောင်း။ ဒါကပန်းခြံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ရေလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့်ဤလမ်းကြောင်းများစွာပျက်စီးခဲ့ရခြင်းကြောင့် everything ည့်သည်များစင်တာများနှင့်၊ Rangers.
ပန်းခြံ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ဖြစ်ပါတယ် ထမ်းရွက်ရေကန်, လှပသောပျော်စရာပျော်ပွဲစား site များ, လမ်းကြောင်းများနှင့်အချက်များအချက်များနှင့်အတူ။ နွေရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး လများတွင်အခမဲ့ဘတ်စ်ကားရှိပါသည်။ Lily Lake သည် Longs Peak ၏လှပသောရှုခင်းများနှင့်အတူငါးဖမ်းဆိပ်ခံတံတားနှင့်မိသားစုများအတွက်အလွန်လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းရှိသည်။
ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့် Rocky Mountain အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည် တောင်တက်သမား၏နေ့ရက်များ ပျော်ပွဲစားအတွက်ကြယ်ကြယ်ည ငါးစခန်းချနေရာများ(သို့) ၆ လကြိုတင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားနိုင်ပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့စခန်းတွေကိုလည်းခွင့်ပြုထားတယ်။ မြင်းစီးခြင်း မေလကနေပန်းခြံအပြင်ဘက်မှာရှိသကဲ့သို့အများအပြားဖွင့်လှစ်နှစ်ခုတည်နေရာ, ငါးဖမ်းခရီးစဉ် ရေကန် ၅၀ နှင့်အခြားမြစ်များစွာတို့တွင် \_ t ငှက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်visit ည့်သည်များသည်ထိုမြေများအားလူသားများသိမ်းပိုက်ထားခြင်းနှင့်၎င်းအားပြဌာန်းထားသောအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များပါရှိသည် Rangers သို့မဟုတ် Ranger ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » အမေရိကန် » ကျောက်တောင်တန်းများသို့သွားပါ